Bvisa bhatiri goko uye gadza 2xAAA mabhatiri. Wobva wavhara iyo USB dongle mu USB chiteshi cheyako kifaa, kure ichave yakabatana neyechigadzirwa otomatiki. Kwayedza nekudzvanya makiyi ekufambisa (kumusoro, pasi, kuruboshwe, kurudyi) uye uone kana kuri kushanda. Kana zvisiri, tarisa chidimbu1 muFAQ.
I. Chigadzirwa Dhayagiramu
1. Kushandisa sei
Bvisa bhatiri goko uye gadza 2xAAA mabhatiri. Wobva wavhara iyo USB dongle mu USB chiteshi cheyako kifaa, kure ichave yakabatana neyechigadzirwa otomatiki. Kwayedza nekudzvanya makiyi ekufambisa (kumusoro, pasi, kuruboshwe, kurudyi) uye uone kana kuri kushanda. Kana zvisiri, tarisa chidimbu 1 muFAQ.
2. Cursor kukiya
1) Dhinda Cursor bhatani kuvhara kana kuvhura cursor.
2) Ipo cursor yakavhurwa, OK kuruboshwe tinya basa, Kudzoka kurudyi tinya basa. Ipo cursor yakavharwa, OK iri ENTER basa, Kudzoka kuri RETURN basa.
1) Haasi ese majaira aigona kushandisa Microphone. Ichada APP kutsigira izwi rekuisa, seGoogle app.
2) Dhinda Google Voice bhatani uye bata kubatidza Microphone, kusunungura kudzima Microphone.
4. IR Kudzidza
1) Dhinda POWER bhatani pamhepo mbeva, uye bata chinhu tsvuku LED chiratidzo chiratidzo nekukurumidza, wobva wasunungura bhatani. Chiratidzo chetsvuku chichagara pane 1 sekondi, wozo penya zvishoma nezvishoma. Zvinoreva mhepo mbeva yakapinda mu IR yekudzidza modhi.
2) Nongedza iyo IR iri kure kumhepo mbeva, uye pinda simba (kana chero mamwe mabhatani) pane IR kure. Iyo yakatsvuka chiratidzo pamhepo mbeva ichapenya nekukurumidza kwemasekondi matatu, wozopenya zvishoma nezvishoma. Zvinoreva kudzidza kubudirira.
● l Bhatani reMasimba chete ndiro raigona kudzidza kodhi kubva kune mamwe maremote.
● Iyo IR iri kure inoda kutsigira NEC protocol.
● Mushure mekudzidza kubudirira, SIMBA bhatani rinongotumira IR kodhi.
5. Akatungamirira chokukomborerwa inoratidza zvakasiyana ruvara zvakasiyana chinzvimbo:
1) Yakatemerwa: Dzvuku reDVD chiratidzo chinononoka zvishoma
2) Kuchengeta: Tsvuku LED chiratidzo chinomhanya nekukurumidza pairing, uye chakamira kupenya mushure mekubatana
3) Kushanda: Bhuruu ye LED chiratidzo chinoshanduka pachiri kudzvanya chero bhatani
4) Simba rakaderera: Red LED chiratidzo chiratidzo nekukurumidza
5) Kubhadharisa: Red LED chiratidzo chinoramba chiripo uchichiraja, uye chinodzima mushure mekuchaja kwapera.
6. Hot makiyi
Tsigira imwe-kiyi kuwana kweGoogle Voice, Google Play, Netflix, Youtube.
7. Mamiriro ekumira
Iyo kure inopinda munzira yekumira mushure mekusaita kwemasekondi gumi nemashanu. Dhinda chero bhatani kuti riite.
8. Kudzosera zvazvanga zviri kubva kufakitori
Dhinda OK + Dzoka kuti umise patsva kure kure kumisikidza fekitori.
1) Kufambisa uye Kudzora: 2.4G RF isina waya radio-frequency tekinoroji
2) Yakatsigirwa OS: Windows, Android uye Mac OS, Linux, nezvimwe.
3) Nhamba dzakakosha: 17keys
4) Remote control daro: ≤10m
5) Bhatiri mhando: AAAx2 (isina kuiswa)
6) Simba rekushandisa: Inenge 10mA mune mamiriro ebasa
7) Microphone simba rekushandisa: About 20mA
8) Saizi: 157x42x16mm
9) Kurema: 50g
1. Nei kure isiri kushanda?
1) Tarisa bhatiri uye uone kana riine simba rakakwana. Kana yakatsvuka LED chiratidzo chinokurumidza, zvinoreva kuti bhatiri haina simba rakaringana. Ndokumbira kutsiva mabhatiri.
2) Tarisa unogamuchira USB uye uone kana yakanyatsoiswa mumidziyo. Tsvuku LED chiratidzo chiratidzo zvishoma zvishoma zvinoreva kuti pairing yakundikana. Mune ino kesi, ndapota tarisa chidimbu 2 chekubatanidzwazve.
2. Nzira yekubatanidza sei USB dongle nerekure?
1) Isa 2xAAA mabhatiri, tinya HOME uye OK panguva imwe chete, mwenje weLED uchapenya nekukurumidza zvakanyanya, zvinoreva kuti kure kwakapinda mumatanho ekumisa. Wobva wasunungura mabhatani.
2) Isa iyo USB dongle muchigadzirwa (Computer, TV Bhokisi, MINI PC, nezvimwewo) uye mirira anenge matatu masekondi. Mwenje we LED unomira kupenya, zvinoreva kuti pairing kubudirira.
3. Microphone inoshanda neiyo Android TV Bhokisi?
Hongu, asi mushandisi anofanira kuisa Google Assistant kubva kuGoogle Play Store.
1. Iri remota riri kwese kure kure controller. Zvakajairika kuti makiyi mashoma anogona kusashanda kune mamwe emidziyo nekuda kwemakodhi akasiyana evanogadzira akasiyana.
2. Iyo kure inogona kusabatana neAmazon Fire TV uye Fire TV Stick, kana imwe Samsung, LG, Sony smart TV.
3. Ita shuwa kuti mabhatiri ane simba rakaringana pamberi kuisa mune iri kure.